अल्पमतमा प्रधानमन्त्री ओली ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूहले आफूलाई मतदान गर्ने विश्वास प्रधानमन्त्री ओलीको छ । जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ओलीलाई मतदान गर्ने छैनन् । ठाकुर र यादव समूहसँग १७–१७ सांसद छन् । यद्यपि, केही सांसद अहिले पनि गुट परिवर्तन गर्नेक्रम जारी नै रहेकाले संख्यामा केही तलमाथि हुन सक्छ ।
२ सय ७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेको १ सय २१ सिट छ । कांग्रेसको ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९ (पार्टी छाडेका ४ पदमुक्त भएपछि), जसपाको ३४, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको १–१ सिट रहेको छ । कांग्रेसका दुई र जसपाको दुई जना सांसद निलम्बित छन् ।
प्रतिनिधिसभामा अहिले रहेका २ सय ६७ सांसदको आधारमा सरकारका लागि १ सय ३४ चाहिन्छ । कांग्रेसको ६१, माओवादीको छक्कबहादुर लामासहित ५० र यादव समूहका १७ सहित ओलीइतर गठबन्धनसँग १ सय २८ सांसद मात्रै हुन्छ । साना दलका सांसदलाई ओली वा ओलीइतरका गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा ल्याए पनि कसैको पनि बहुमत पुग्दैन । राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।